यात्रा शुरु गर्नु अघि अदुवा हालेको चिया पिउँदा के हुन्छ ? तपाईलाई थाहा छ ? – Complete Nepali News Portal
यात्रा शुरु गर्नु अघि अदुवा हालेको चिया पिउँदा के हुन्छ ? तपाईलाई थाहा छ ?
September 19, 2017	439 Views
काठमाण्डौं, असोज ३ : जाडोमा अदुवा हालेको चिया पिउनुको आफ्नै महत्व छ । अदुवामा भिटामिन सीको मात्र उच्च हुन्छ भने म्याग्नेसियम र अन्य खनिज पनि पाइन्छ । अदुवाको जरा स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै राम्रो मानिन्छ ।अदुवाको चिया बनाउँदा मह र कागती समेत मिलाउन सकिन्छ ।